बलिउडाका पुरुषहरू आइएफए २०१ 2017 मा दायाँ पूर्ण दाढी शैलीका लागि जाँदैछन्; यिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस्! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
बलिउडाका पुरुषहरू आइएफए २०१ 2017 मा दायाँ पूर्ण दाढी शैलीका लागि जाँदैछन्; यिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस्!
घर सुन्दरता कपाल को स्याहार कपाल हेरचाह oi-Kripa द्वारा कृपा चौधरी जुलाई १,, २०१ on मा
ठ्याक्कै महिला बिरामीलाई जस्तै, बलिउड पुरुषहरूले पनि आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत गरे जब यो आईफा २०१ 2017 कार्यक्रमको लागि आयो। यस पटक, यो कलाकार मात्र होइन तर गायकहरू, संगीतकारहरू, निर्देशकहरू, निर्माताहरू, इत्यादि पनि, विभिन्न शैलीका साथ बाहिर आयो र शीर्ष वर्ग देख्यो। उनीहरू निश्चित थिए कि उनीहरूले आफ्ना लुकमा प्रयोग गरेका थिए।
परिणामहरू हो, यी पुरुषहरूले निश्चित रूपमा बाहिरका अन्य पुरुषहरूको लागि गम्भीर फेशन गोलहरू सेट गर्छन्। कपालदेखि शेडहरू वा पोशाकसम्म, प्रयोगको कडा सint्केत आईफा the २०१ events को सबै बलिउड पुरुषहरूमाझ देखियो।
पूजा कोठामा मूर्तिहरूको आकार
यस लेखमा, हामी तपाईंलाई आठ उत्तम पूर्ण दाढी शैलीहरू प्रस्तुत गर्दछौं जुन बी-टाउनका मानिसहरूले छनौट गरेका थिए। यद्यपि उमेरका हिसाबले यो सूची एकदम फरक छ, यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो हेराईले वास्तवमा आफ्नो पूर्ण दाह्री शैलीको साथ दस लाख भन्दा बढी हृदय जित्यो। अब जाँच गर्नुहोस्!
अभय डोएल: स्पष्ट जुँगाको साथ काँटी दाढी
आईएफए कार्यक्रममा प्रायः नदेखेको भए पनि अभयले अन्तिम पुरस्कार रातमा उनको चुरोचो दाढी शैलीको साथ शो चोरेका थिए, उनी सामान्य सामान्य सफा दाह्री भन्दा बिलकुलै विपरित थिए। श्री डोएलको शेडहरू मात्र उनको फेसन योगफलमा थपियो।
अनिल कपूर: को-जोडिएको मिछो र दाह्री, उनको हस्ताक्षर स्टाइल
S ० को दशकका महिलाहरू सधैं आफ्नो जुँगाको स्टाइलमा झुन्डिएकी छन् र यस पटक यो ओठको मुनि र हल्का दाढीको दाँतको मुनिको प्रकाश बोक्राको साथ थियो। उसको जेट कालो कपालले हामीलाई श doubt्का गर्छ कि ऊ वास्तवमै 60० बर्षको छ कि छैन?
करण वाही: गोलाकार जुँगाको साथ पूरा हुर्किएको दाह्री
ठीक छ, करणको दाढी शैलीलाई सावधानीपूर्वक सूचना आवश्यक छ। जुँगा वरिपरि, ऊ काँडा ठाँउ जस्तै दुई कोष्ठकहरु थियो, जसले आफ्नो जुँगा गोलाकार देखिन्छ। साथै, पूर्ण अनुहारको दाह्रीको साथ एक छुट्टि गोटीले सँगै जवान नायकलाई भयानक देख्यो।
रितेश देशमुख: नेकलाइन नभएसम्म पूर्ण विकसित मोटी दाढी
जब रितेश न्यु योर्कमा आइएफए स्टेजमा थिए, कसैले उनको पहिलो बलिउड फिल्म - तुझे मेरी कसमसँग आफ्नो लुक सम्बन्धित गर्न सक्दछन्? एक पूर्ण परिपक्व manly look नेकलाइन सम्म बाक्लो अनुहारको कपालको साथ उसको व्यक्तित्व लिनुभयो। उसको बदलाव निश्चित रूपमा पाँच तारे रेटिंगको योग्य छ।
शिकागोमा स्वामी विवेकानन्दले दिएको भाषण
राज कुन्द्रा: मोटो दाह्री एक अंग्रेजी शैली मूछको साथ
यद्यपि एक अभिनेता हैन, तर उनको शैली कथन अस्वीकार गर्न मिल्दैन र पूर्ण रूपमा आफ्नो कामुक पत्नी संग बराबर छ। जे होस् शिल्पासँग प्राय जसो सँधै उनको वरिपरि रहेको थियो, यहाँ हामीले न्यु योर्कबाट आएका एक सेल्फी पायौं जुन श्री कुन्द्राले आफ्नो सोशल मिडिया पेजमा साझा गरेका थिए। यसले स्पष्ट रूपमा उसको अ must्ग्रेजीको जुँगा र चारैतिर पालेको दाह्री देखिन्छ।
ज्याकी भग्गानी: बाक्लो गोटी र मुछोको साथ दाढी
बाक्लो जुँगाले मुख्य रूपमा आफ्नो दाह्रीमा सम्मिलित भयो, ज्याकीले कक्षाको जस्तो देखिन्थ्यो। उसको सानो अनुहारमा कुनैले पनि गोकुलाई याद गर्न सक्दैन जुन अझै परिपक्व छ, ओठको मुनि तल। कपालको स्पाइक, बोल्ड आइब्रोज, र यो दाह्री शैलीले उनलाई आईफा ग्लैम कार्यक्रममा स्ट्यान्डअप बनायो।
शाहिद कपूर: पूरा हुर्किएको दाह्री ओठले ढाकेको जुँगाको साथ
यति धेरै महिला अनुयायीहरू उनको पूरै दाह्री हेराईमा झुकिरहेका थिए, यद्यपि त्यो मानिस न्यु योर्कमा लगातार आफ्नी श्रीमती वा बच्चाको साथ देखियो। आइफामा शाहीदको दाह्री शैली जाँच गर्दा, साइड मा स्वीप गरिएन केशलाई नछार्नुहोला जुन उसले आफ्नो माचो मन्त्रालय पूरा गर्नका लागि रोजे।
सुनील शेट्टी: राम्रा दाह्रीको साथ मोटो फ्रेन्च कट स्टाइल
बलिउड फिल्म उद्योगका एक अनुभवी कलाकार सुनीलले आइफा कार्यक्रममा पूर्ण दाढी पनि पाए। यद्यपि उसको अनुहारको कपालको असाधारण पक्ष भनेको उसको ओठको मुनि सफा आकृति थियो। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्।
कसरी खोर्सानी चिकन भिडियो बनाउन
जन्म मिति र समय द्वारा विवाह भविष्यवाणी
बोतल लौकी को रस वजन घटाउन को लागी
कसरी आफ्नो पतिलाई खुशी बनाउन
चिनी बिना कालो कफी को लाभ